လျှိုဝှတ်ဥယျာဉ်: မမြင်လိုက်ရတဲ့ ဖြစ်စဉ်နိဂုဏ်း
“၀ုန်း” ဆိုတဲ့ အသံကို ကြားလိုက်တော့ နာရီထကြည့်လိုက်သည်။ အချိန်က ညဥ့်သံခေါင်ယံကျော် စက်တင်ဘာလ(၂၇)ရက်နေ့မနက် ၁း၁၅ နာရီ၊ အသံလာရာဖက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ တွေ့ပါသည်။ ယာဉ်နှစ်စင်း တိုက်သည့် အသံဆိုတာ သေချာသွားပါသည်။ နေရာက ပြည်လမ်းနှင့် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းကြား၊ ပါရမီ လမ်းမကြီးပေါ်မှာပါ။ AD မီးပွိုင့်ဖက် ယခင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦးရဲ့အိမ်ရှေ့မှာပါ။
တစ်စီးက Nissan Sunny Super sloon (၃က/၂၀၉၀၊ ယာဉ်မောင်း ဦးမြင့်အောင် (ဘ) ဦးအေး၊ အသက် ၃၄ နှစ်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်က ၁၂/လကန(နိုင်) ၁၄၇၈၄၉၊ လိပ်စာက အမှတ် ၁၉/၃၁၉၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း) နဲ့ နောက်တစ်စီးက Toyota Probox (၂စ/၇၉၃၃၊ ယာဉ်မောင်း ဦးကျော်ကျော်ထွန်း (ဘ) ဦးဇော်မြင့်၊ အသက် ၂၉ နှစ်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်က ၇/သတပ(နိုင်) ၀၈၇၁၃၉၊ လိပ်စာက အမှတ် ၁၃၉၊ ဘုရားလမ်း၊ ဒေါ်တင်တင်မီးစက်ဆိုင်၊ လှိုင်မြို့နယ်) တို့ဖြစ်သည်ဟုသိရှိရပါသည်။
ကားနှစ်စီးလုံးမှာ ညာဖက်ရှေ့ဘီးများ သုံးမရအောင် ပျက်ဆီးသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဆက်လက် မောင်း နှင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ.။ အခင်းဖြစ်တဲ့ နေရာက အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာပါ။ အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမိုးဟိန်းနှင့် တကွ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးမှ ရုံးဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ကြသည့် ဦးဇော်မင်းထွန်း၊ အရံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တပ်စုမှူး တို့လည်းရောက်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။
အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့ သတင်းများ တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် အခင်းဖြစ် ယာဉ်နှစ်စီးအား ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရာတွင် TOYOTA Probox ယာဉ်မောင်း ဖြစ်သူ ဦးကျော်ကျော်ထွန်း က--
“မင်းတို့ဘယ်ကလည်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်စရာမလိုဘူး” ဟု ပြောပြောဆိုဆို အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမိုးဟိန်း ရဲ့ ကင်မရာ ရှေ့မှာ သူ့လက်နဲ့လိုက်ကာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ဆက် တည်းမှာပဲ ဦးမိုးဟိန်း က Mobile Phone ကို ခလုတ်နှိပ်ပြီး ပြောနေတာကို လည်းတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ သိပ် မကြာပါ ဘယ်ကို
ဆက်လိုက်သည်တော့ မသိပါ၊ ၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့ Probox TAXI ယာဉ် တစ်စီးနဲ့ လူ နှစ်ယောက် ရောက်ရှိလာပါတယ်။
စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက်က ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နဲ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်က ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ၀န်ထမ်း ဦးငယ် ဆိုသူတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရဲစခန်း၊ တာဝန် မှူး ထံသို့ လည်း ဖုန်းဆက်သံကြား လိုက်ရပါသည်။ ဖုန်းကို Hand Speaker ဖွင့်ပြောနေတဲ့အတွက် မြို့နယ် ရဲစခန်း ကတာဝန်မှူးရဲ့ပြန်ပြောတဲ့အသံကိုလည်းပြန်ကြားနေရပါတယ်…
တာဝန်မှူး ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ အသံကို ကြားတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားတာတော့အမှန်ပါ။ ခပ်ပေါ့ပေါ့ဖြင့်
“သူတို့ဖာသာသူတို့ပြီးသွားလိမ့်မယ်” တဲ့ ကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာ… ဒါတောင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကလှမ်းပြီး အကူအညီ တောင်းခံတာနော်…. ပြည်သူတွေထဲကများ အကူအညီတောင်းခံရင် ဘယ်လိုပြန်ပြော မလည်းဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့…
အဲ့ဒါနဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက မလျှော့သောဇွဲနဲ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှူး ဦးသန်းနိုင်ထံသို့ ထပ်မံ ဖုန်းဆက် နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူ့စရိတ်နဲ့သူလာပြီး အကူအညီပေးဖို့ ကိုပြုလုပ် နေတာကိုတွေ့ရတာ တကယ့်ကို ဂုဏ်ယူစရာပါဗျာ..
ဒါနဲ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှူး ဦးသန်းနိုင် က ညဥ့်နက် လှည်းကင်းကို လှမ်း အကြောင်းကြားစေခိုင်း လိုက်တယ်နဲ့တူတယ်….. ၁း၄၅ အချိန်လောက် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လှည့်ကင်းတာဝန်ခံ နှစ်ဦးရောက်ရှိ လာကြ ပါတယ်၊ ရောက်ရောက်ခြင်း TOYOTA Probox ယာဉ်မောင်းအား သွားရောက် စစ်ဆေးမေးပြန်တဲ့ အချိန်မှာ ယာဉ်မောင်းကလည်း မချေမငံ ပြန်ပြောတာတွေ့ရတယ်။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှ လာ စစ်စရာမလိုဘူး လူကြီး တွေခေါ်ပြီး ရှင်းလိုက်ရင်ပြီးသွားမယ်တို့ ဘာတို့ပြန်ပြော နေတာလည်း တွေ့ရတယ်။
ကြည့်ရတာ လူကြီးသား သမီးတွေလား မသိဘူး၊ တကယ်ဆိုရင် ရပ်ကွက်တာဝန်ရှိသူတွေ၊ လှည့်ကင်း တာဝန်ခံတွေက သူတို့ကို ကူညီဖို့ရောက်လာကြတာပါ။ အဲ့လိုတော့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြန်ပြောဖို့မသင့်ပါဘူး၊
မရှေးမနှောင်းမှာ UNIT CRANE ရောက်လားပြီး တစ်စီးခြင်းစီ ယာဉ်ထိန်းစခန်း နယ်မြေ ၂ သို့ ဆွဲသွားပါ တယ်။ ရောက်ရှိလာတဲ့ ယာဉ်မှုစစ်အမည်ကတော့ ဒုရဲအုပ် ဦးသန်းမင်းထွန်း ပါ။ အကူအဖြစ်ပါရှိလာသူကို တော့ အမည်မသိလိုက်ရပါ။
ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ပြောပြချက်အရ TOYOTA Probox မောင်းလာတဲ့ ဦးကျော်ကျော်ထွန်းက အရက်အရမ်း မူးပြီး လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းပြီး ကျော်တက်တယ် ပြောပါတယ်။ တစ်ဖက်ကကားက ရှောင်ပေး တာတောင် သူက ၀င်တိုက်ဖြစ်အောင်တိုက်လိုက်သေးတယ် ဟု ပြောဆိုသံများကိုလည်း ကြားလိုက်ရပါတယ်….
NISSAN Sunny Super Sloon ပေါ်က ယာဉ်မောင်းကတော့ ယာခြေမျက်စိဖူးယောင်၊ ယာ နားထင် ပေါက်ပြဲ၊ ၀ဲ ဂျိုစောင်း ပေါက် (မပြင်းထန်) ပေမဲ့ နောက်ပါလာတဲ့ တစ်ဦးကတော့ ယာဖက် ရင်ဖတ်အောင့် နေတယ်ဆိုတာနဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များက အငှားယာဉ်တစ်စီးငှားပေးပြီး ရန်ကုန်ပြည့်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ ရပါသည်။
ရေးသားသူ hlyothwetuyin ဘယ်နေ့က 9/28/2013 06:10:00 am